Diiwaangelinta Hore | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Minnesota gudaheeda, carruurta waxaa laga rabaa inay shan jir noqdaan ama ka hor Sebtember 1 si ay u galaan xanaanada. Sharciga Minnesota wuxuu kaloo siiyaa degmo dugsiyeedyada deegaanka xoogaa dabacsanaan ah go'aaminta habraaca diiwaangelinta hore ee carruurta leh dhalashada dayrta. Gudaha Dugsiga Degmada Minnetonka, tixgelinta diiwaangelinta hore ayaa loo heli karaa carruurta leh dhalashada inta udhaxeysa Sebtember 2 iyo Oktoobar 31.
Ardayda Diiwaangelinta Hore xaq uma laha barnaamijka RSK.
Isqorista hore waa go'aan weyn oo qoysaska badankood. Xulashada isdiiwaangalinta hore waxaa loogu tala galay caruurta leh dhalashada dayrta oo muujiyey u diyaar garowga inay ku guuleystaan ardayda fasalka-dardar galiyay dhamaan khibradooda iskuulka K-12. Maaddaama guusha dugsiga ee ilmahaagu ay aad muhiim noogu tahay, waxaannu ku dhiirrigelinaynaa in si taxaddar leh looga fiirsado faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka hore ee gelitaanka Waxaan rajeyneynaa inaan buuxino baahiyaha waxbarasho ee ilmahaaga.
Talaabooyinka diiwaangelinta hore
Waalidiinta, dhammeystir oo soo gudbi Codsiga Diiwaangelinta Xanaanada Hore illaa Maarso 15.
Macallimiintu, way dhammaystiraan oo soo gudbiyaan Foomka Su'aalaha Dugsiga Hore ee Diiwaangelinta ugu dambayn Maarso 15.
Hadaad codsaneysid Isdiiwaangelinta Hore Iyo Isqorista Furan , waa inaad buuxisaa oo aad soo gudbisaa Foomka Diiwaangelinta Furan illaa iyo Janaayo 15.
Baaritaanka iyo qiimeynta
Baadhitaan hordhac ah waxaa qaadi doona macalinka xanaanada caruurta ee degmada iyo Isuduwaha Diiwaangelinta Hore. Si loo buuxiyo shuruudaha horudhaca ah ee diiwaangelinta hore ee xanaanada, natiijooyinka baaritaanka cunugga waa inay muujiyaan ka sarreeya celceliska bulshada iyo shucuurta qaangaarka ah, awoodda si qancin leh u buuxisa himilooyinka xanaanada, iyo awoodda u gudubka fasalka koowaad sanadka soo socda.
Haddii shuruudaha u-qalmitaanka horudhaca ah la buuxiyo, canugga waxaa lagu casuumi doonaa qiimeynta sirdoonka ee Degmadu ansaxisay oo ay maamusho khabiir cilmi-nafsi oo iskuul shati haysta. Si loo buuxiyo shuruudaha aqooneed ee diiwaangelinta hore ee xanaanada, qiimeynta cunugga waa inay muujisaa awoodda garasho ee ka sarreysa (IQ ee 130 ama ka sarreysa). Dhakhtarka cilminafsiga wuxuu siin doonaa warbixin iyo talooyin Isuduwaha Diiwaangelinta Hore.
Koox xirfadlayaal ah oo ka kooban Isuduwaha Diiwaangelinta Hore, Isuduwaha Adeegyada Sare ee Sare, Kaaliyaha Kormeeraha Guud ee Tilmaamaha, Macallinka barbaarinta carruurta ee Degmada, dhakhtarka cilmu nafsiga ee degmada, iyo maamulaha dugsiga uu ilmuhu ka qayb geli doono ayaa samayn doona go'aanka meelaynta ilmo kasta.
Go'aanka Guddiga wuxuu noqon doonaa kama dambaysta. Go'aanka waxaa isla markiiba la socodsiin doona waalidiinta Isuduwaha Diiwaangelinta Hore, ugu dambayn Abriil 30 ka hor diiwaangelinta la filayo.
Nuqulada macluumaadka la soo ururiyey iyo go'aanka Guddiga Diiwaangelinta Hore ayaa la heli doonaa markii la codsado. Deganeyaasha hadda jira ee seegay waqtiga kama-dambaysta ah ee 15-ka Maarso ayaa laga fili doonaa inay u diraan carruurta da'da ku habboon xilliga xanaanada, haddii aysan jirin duruufo durugsan.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid nidaamkan iyo / ama diiwaangelinta hore ee xanaanada, fadlan haka waaban inaad wacdo maamulaha iskuulka xaafadaada ama Joan Larson lambarka 952-401-6950.
Diiwaangelinta Deggane Degane
Fur Arjiga Diiwaangelinta
Xiriirka Diiwaangelinta Hore
Isuduwaha Diiwaangelinta Hore